Namuhla kunomkhuba okukhulu. Times knickknacks azikubheki irretrievably Ngishoné lwanyamalala, ulahlekelwa yindawo yakhe eyingqayizivele imigexo, izingubo nezinye izinsimbi owenziwa ngezandla anekhono amakhosi. Loud igama elithi "imfashini" is yokulahlekelwa phansi engengaphansi sonorous elithi "ubuntu", "isitayela", "ukunambitheka".
udumo omkhulu hhayi kuphela izingubo kombhali kanye izicathulo, kodwa futhi izesekeli. Futhi namhlanje sizobe ukwakha umhlobiso engavamile - sotuar. Lokho kuyinto, it namanje akwaziwa zonke, futhi eqinisweni umlando le-accessory has angaphezu kwelilodwa eyishumi. Sekuyisikhathi ukuqeda zonke izikhala ninake ngenxa le nto emangalisayo.
Ekuqaleni kusukela esikhathini esidlule
Abanye besifazane babe ibhokisi ekhetheke kakhulu nge imihlobiso. Kulezi engcebeni cishe ukuthola izitayela fashion, kodwa kagogo amber ubuhlalu kusuka 50s noma coral namacici, okuyinto umama egqoka 70s - inguyebo. Futhi kungakhathaliseki ukuthi kukhona phakathi kwezinye izinto yezinhlamvu omude amapharele, okungase ukugoqa entanyeni izikhathi 2-3? Noma, mhlawumbe nje, uchungechunge nge elengayo, uhlanganyela cishe okhalweni yakhe, kukhona akacashi? Noma mhlawumbe ekhoneni curled bead ngentambo, okungase qedani futhi phansi? Uma kwenzeke uzithola imigqomo ngesikhathi into efana - ijabule! Lena sotuar. Kuyini, ungase ukwazi, kodwa ngokuqinisekile leyonkulumo ivela izikhathi ezingama, futhi mhlawumbe ukugqoka. Nje izwi lale eyayibonakala ingavamile. Lokhu kwenzeka kaningi impela. Iqiniso lokuthi sotuar - akuyona into entsha, futhi namuhla ihlangabezana akulona kwentsha wokuqala noma lesibili. Umhlaba kakade crazy ngalento kwi, futhi manje sekuyisikhathi ubuyele kuye ebhokisini nge imihlobiso.
Nokho, uma wena lucky ngokwanele ukuthola le-accessory liphakathi imigexo ozithandayo kanye nengxenye ukhohliwe, akufanele athukuthele. It kungenziwa ngokuzimela. Yebo, yenza ukuthi bonke nje ziyashaqeka zibuye!
Kukholakala ukuthi sotuar uvele ngaphambi 20s kwekhulu lamashumi amabili. Kwabe sekwenzekani ezisezweni fashion! Le nkathi kwaphawulwa wokubusa isitayela Art Deco, inhlanganisela yayo crazy boyish futhi njengabesifazane, minimalist kanye okunethezeka. Yingaleso sikhathi lapho imfashini eside ubuhlalu mncane ulenga phansi okhalweni. Futhi uhlobo okuqhubekayo kakhulu baye phambili kungasekho waphithizelisa lezi ubuhlalu efanayo emuva noma yeqa ngabo ngesandla esisodwa. Futhi kwakukhona igama elithi "sotuar". Kuyini lokhu? Kulula - French kusho "bakhathale phezu kwehlombe."
Kufanele ngizibheka version olusemthethweni kweqiniso kuphela? Ngempela, emiphakathini eminingi emhlabeni into emhlabeni efana naleyo sekungamakhulu ngamakhulu eminyaka zikhona. Iqiniso, njengenjwayelo, endaweni ethile phakathi: sotuara kuye kwadingeka eziningi prototypes, futhi okokuqala efika vogue kule 20s kwekhulu elidlule. By the way, ngalezo zinsuku, iningi lalezi imihlobiso benziwa yena. Ngakho, lokhu amandla futhi nathi.
Ngaphambi kokuba uqale, kubalulekile ukuba unqume ukuthi kuyoba accessory ye ethu esikhathi esizayo. Namhlanje sotuary ethandwa kakhulu ubuhlalu, ubuhlalu emvelo noma amapharele cultured, namatshe anenani, zinhlayiya, amaketanga ngisho ntambo izinyanda.
imigexo ekhazimulayo ngamatshe noma ubuhlalu, "Swarovski" - kungcono kukho olukhulu emishadweni, iziqu, usuku lokuzalwa. No kancane ngesizotha ubukeka amapharele nokumlingisa. Uma uhlela ukwenza nesisekeli nsuku, khetha ingilazi, zensimbi noma plastic ukwenza sotuar. Ikilasi master sizosisiza sonke ukuba siqonde. Kakhulu elikhanyayo izithombe ehlobo etholakala ngokusebenzisa ubuhlalu.
Senza sotuar ukumiswa-ibhulashi
Ukuze womshini le-accessory zakudala sidinga intshakaza kasilika ngentambo, neketanga lwemigexo, a ubuhlalu ambalwa ithoni nge ibhulashi kanye ambalwa esobala, obnimateli (ezimbili bead ngamunye) kanye nobucwebe izikhonkwane. Ithuluzi uzodinga impintshisi, impintshisi ne sikelo ngoba metal.
Sotuar nge ibhulashi: isigaba master
Phakathi nabo bonke ubuhlalu ulahlekile izikhonkwane, ungakhohlwa mayelana obnimateli. Round round off imikhawulo izikhonkwane, metal ngokweqile anqunywe.
Uthathe izingcezu uchungechunge 3-7 cm.
Alternately ukuxhuma izihibe iketango izikhonkwane ukwakha sotuar.
Lapho umkhiqizo ifinyelela ubude ofiselekayo phakathi emikhawulweni yaso, Bopha buhlalu, ke ulungise ibhulashi.
Isimiso esifanayo zingenziwa nge sotuar ibhulashi hhayi neketanga, futhi kuchungechunge ubuhlalu. Futhi uma wazi ukuluka ngensonto lobuhlalu plaits, leli khono kungaba wusizo lapha. Isimo main - ubude umkhiqizo kufanele kube ngokwanele ezinkulu.
Indlela yokwenza sotuar lobuhlalu
nice kakhulu nenhle ukubukeka sotuary bead. Kubalulekile athobele ngesilinganiso. Umkhiqizo luba lude hhayi kuphela, kodwa futhi ngempela aluhlaza. Ukuze wenze lokhu, ukuqoqa ke kusukela amaningi lobuhlalu imicu. Akunakusetshenziswa ungazami ukusebenzisa eshibhile yekhwalithi ephansi ubuhlalu! Khetha bushelelezi futhi iyunifomu ngosayizi. Khona-ke sotuar zakho bayokuhlola Lihle futhi emuhle.
Good okuqinile-umbala, nombala. Ungasebenzisa "isobho" - inhlanganisela imibala ehlukene lobuhlalu ngohlobo olulodwa. Noma unga string buhlalu umucu nombala ofanayo ngalinye. Ohlanganisiwe kubukeka eliqhakaze ngempela. It uhlala kuphela silungise zonke izindikimba ndawonye ngesikhathi amathiphu, wabeka phezu kwabo obnimateli bese unamathisela ukuyona.
kulula njengoba pie
Uma manipulation ubuhlalu, umbala ofanayo kanye nomsebenzi ngethuluzi - akusiwona inguqulo yakho, kodwa umphefumulo ecela okuthile okungavamile, ungalilahli ithemba. Qala ne kakhulu elula. Yenza enkulu mncane amaphiko sotuar. Kuyini, ungabona esithombeni.
Uzodinga kahle ubucwebe iketango buhlalu lobubili. Khetha pearl noma "Swarovski". Vikela ubuhlalu imikhawulo iketanga, njengoba kuchaziwe ngenhla, futhi sotuar umane tie ifindo. Yiqiniso, ungenza isixha emhlane nasesifubeni. It kuncike isitayela sokugqoka, kusukela ngalo ohlose ukuba agqoke umhlobiso.
Vumelanani ngokuthi, ukwenza sotuar izandla zabo ilula. Futhi uma ithola elula, kufika ithuba ukuze kuyinkimbinkimbi futhi eyinkimbinkimbi.
Kukholakala ukuthi lokhu umhlobiso akuyona kuphela ezifanelekela kusihlwa igqoka, kodwa futhi lifaka phakathi isitayela kalula izinto. Kuzoba ezifanele futhi uhambo, futhi ehhovisi, kanye epikinikini.
Uma uhlose ukuba, ungesabi ukuphonsa emuva sotuar umphelelisi ingubo zabo nqunu emuva laconic. Ngaphezu kwalokho, kungaba izikhathi eziningana ukuze ugoqe entanyeni ngesimo ubuhlalu iDemo. Lokhu sikwazi ukwenza izinto ezihlukahlukene kanye futhi nesandla popularization of sotuara.
Long isiketi ngezandla zakhe: amathiphu wabaqalayo
Toilet emthonjeni: idivayisi, isimiso yokusebenza. Faka yangasese ethangini
Ukwakheka "Neyromultivita", ukubuyekezwa kanye analogue